गल्ती गर्ने प्रहरीले रोसनाको विल नतिर्ने | पैसा खानका लागि अदालतको तीन तले भवनमा ७ तले लिफ्ट ! – Complete Nepali News Portal
ScotNepal April 14, 2018
प्रहरी जवानले चलाएको गाडीले घाईते रोशनाको उपचारको पैसा नेपाल प्रहरीले,प्रहरी जवानबाटै असुलेछ। एक प्रहरी जवानले डीउटीमा खटिएको बेला गरेको गल्ती डिपार्टमेन्टले जिम्मा लिने कि जवानको घर घरनाबाट असुल्ने? यसरी रोशना अझै न्यायको लडाइँ लड्दैछिन। हेर्नुहोस् आजको कार्यक्रम जनता संग शिधा कुरा !!